स्टाफ कोरोना संक्रमित भएको थाहा पाएपछि चल्दाचल्दै रोकियो नेपाल आइडलको फाइनल लाईभ (भिडियोसहित)
Homeमनोरंजनस्टाफ कोरोना संक्रमित भएको थाहा पाएपछि चल्दाचल्दै रोकियो नेपाल आइडलको फाइनल लाईभ (भिडियोसहित)
August 29, 2020 admin मनोरंजन 38794
स्टाफ कोरोना संक्र’मित भएको पाइए’पछि गायन रियालिटी शो नेपाल आइ’डलको फाइनलको प्रत्यक्ष प्रसारण बीचमै रो’किएको छ । स्टाफ, जज र प्रतिस्प’र्धी सबै आइसोलेसनमा गएका छन् । कार्यक्रम लाइभ चल्दाचल्दै बीचमै रोकेर एक सूचना प्रसारण गरी यसको जानकारी दिइएको हो ।
सज्जा चौ’लागाईँ नेपाल आ’इडल सिजन–३ को वि’जेता भएकी छन्। शुक्रबार भएको ग्राण्ड फिनालेमा सज्जा नेपाल आ’इडल ३ को बिजेता बन्न सफल भएकी हुन्।
उनले बिजेताको उपा’धि उचाल्दै गर्दा सबैले अ’पेक्षा गरेका प्रवीण बेडुवाल फस्ट रनरअप बने भने सेकेन्ड रनरअपको उपाधि किरण’कुमार भुजेलले उचाले।
दर्शकले विश्व’भरबाट दिएको भोट र निर्णायक’को मूल्यांकनका आधारमा विजेताको घोषणा गरिएको हो। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपाल आइ’डलको विजेता घोषणा गरेका थिए।
नेपाल आइड–३ को उपा’धिसहित विजे’ताले ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी फस्ट रनरअपले १५ लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त ग’रेका छन् । – डिसी नेपाल
यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस्
रियाले स्वीकारिन् गल्ती, सुशान्त’ले म्यासेज पठा’एका थिए तर उनले नम्बरनै ब्लक गरि’दिइन्
August 2, 2020 Administer मनोरंजन, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 34851
The world computerized accumulator and retrieval techniques bazaar is anticipated to postaCAGR of over 7% right through the duration 2019-2023, based on the newest bazaar research document by means of Technavio. This press
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस्
September 15, 2020 admin मनोरंजन 194490
विश्वको सबैभ’न्दा बढी कमाउने फुटब’लर हुन् लियोनेल मेसी । उनलाइ नचिन्ने सायद कमै मात्रमा हाेलान् । तर, उनकाे चर्चा बि’श्वभर प्रसस्त रहेकाे छ । फोर्ब्सले जारी गरेको सर्बा’धिक कमाउने फुट’बलरको सुचीमा मेसीले आफ्ना सद’बहार प्रतिद्वन्दी
September 25, 2021 admin मनोरंजन 4014
केही समय अगाडि सामा`जिक सन्जाल र टिकटकमा एउटा श्रीमानका बारेमा धेरै चर्चा परि`चर्चाहरु चुलिए सबैले श्रीमान भनेको यस्तो हुनु`पर्छ भनेर पनि भने र धेरैले त यस्तै श्रमिान पाए जिन्दगी सुखी र खुशी हुन्थ्यो भनेर पनि